‘ब्युटी प्याजेन्ट’ का नाममा याैन हिंसामा परेकी युवतीको पीडा- बेहोस बनाएर बलात्कार गरेका थिए | ईमाउण्टेन समाचार
जेठ ५, २०७९ पढ्न १३ मिनेट
काठमाडौं । यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ । नपाओस् पनि किन, बलात्कारको घटना छ । त्यसमा पनि सन् २००२ कि मिस नेपाल विजेता माल्भिका सुब्बासम्मलाई जोडिएको छ । बुधबार ‘सुसी खान जाने हो’ टिकटक एकाउटबाट एक युवतीले आफु बलात्कारको सिकार भएको जानकारी दिइन् । २/२ मिनेटका २० वटा भिडियोमा उनले कहिले ? कसरी ? बलात्कृत भइन् त्योबारे जानकारी दिएकी थिइन् ।
आफू बलात्कृत भएकोबारे उनले सन् २००२ कि मिस नेपाल माल्भिका सुब्बालाई समेत जानकारी दिएकी थिइन् । तर, उनले उल्टै भनिदिएछन्, ‘ग्ल्यामसर क्षेत्रमा यो त नर्मल हो ।’ २०७१ सालमा आयोजना गरिएको मिस ग्लोबल नामक ब्यूटी प्याजेन्टका क्रममा ति युवतीमाथि बलात्कार भएको थियो । उनले आफूलाई बलात्कार गर्ने र सहयोग गर्नेहरूको थर मात्र खुलाएकी छिन् । जसमा एक जना फोटो पत्रकार र कन्सल्टेन्सी सञ्चालक रहेको बताएकी छिन् ।
रेग्मी थर गरेकी एक युवती १२ कक्षाको परीक्षा सकिएपछि ‘ब्युटि प्याजेन्ट’ मा सहभागी भइन् । उनले अडिसन दिइन् । तर, अडिसनबाट उनी छनोटमा पर्न सकिनन् । छनोटमा नपरे पनि त्यहाँ भएका तस्बिरहरू बाहिर आएपछि कुनै व्यक्तिबाट उनलाई म्यासेज आयो । ‘तिमी आउ फोटोसूट गरौं, अनि मोडल बनाउँछौं’ भनेर म्यासेज आयो । त्यति म्यासेज आएपछि उनी निकै उत्साहित भइन् । त्यसरी म्यासेज पठाउनेमा थिए, ति फोटोपत्रकार ।
एभरेष्ट होटलमा पार्टी आयोजना गरेको भनियो । उनी त्यहाँ गइन् । जबकि त्यहाँ कोही पनि थिएनन् । उनले प्रश्न गरिन्, खै त अरू मानिसहरू ? उनलाई बोलाएका व्यक्तिले भने, तिमी चाँडै आयौ । अरू विस्तारै आउँछन् । राति ६/७ बजेतिरबाट पार्टी सुरू हुन्छ । तिमी बस्दै गर । केही समयपछि वेटर आएर लेमन जुस दिए । उनले भने,–यो वेलकम ट्रिट हो ।
त्यसपछि उनले त्यो खाइन् । खाएको १० मिनेटपछि उनी आफुलाई अनकन्सियस महसुस गर्न थालिन् । त्यसपछि उनले त्यो एब्युजरलाई भनिन्- मलाई गाह्रो भयो, म घर जान चाहन्छु । एब्युजरले उनलाई गाली गर्‍यो । तिमी विनर भएर यस्तो गर्ने ? तिम्रोबारे अरूले के सोच्लान् ? भनेर गाली गरे । ‘यस्तै हुन्छ, केटीहरूलाई गाह्रो भयो भने रेष्ट गर्नलाई भनेर रूम लिएर राखेको छु, तिमी त्यहाँ गएर एकछिन रेष्ट गर । सबैजना आएपछि म तिमीलाई बोलाउँछु’ भने । त्यसपछि उनी रूममा गएर रेष्ट गर्न गइन् ।
त्यतिबेला उनी १६ वर्षकी थिइन् । जतिबेला उनको नागरिकतासमेत बनेको थिएन् । कोठामा रेष्ट गर्दा बेला-बेला उनलाई होस आइरहेको थियो । जति बेला होसमा आयो त्यतिबेला लाग्यो कोहीले उनका शरिरका अंग चलाइरहेका छन् । उनीमाथि कोही प्रयोग भइरहेको छ । जब उनी होसमा आइन् । त्यो बेला उनी पुरै नाङ्गै थिइन् । उनीसँगै त्यो एब्युजर पनि उनीसँगै पुरै नाङ्गै सुतिरहेको थियो । पुरै ओछ्यानभर रगत थियो । त्यसपछि उनी छाँगाबाट खसेझैँ भइन् । एकदमै ठूलो स्वरमा कराइन् ।
त्यति भनिसकेपछि उनको बोली रोकियो । निकै तनावपूर्ण अवस्थामा उनी त्यहाँबाट घरतिर लागिन् । त्यसपछि उनले ब्यालमेलिङ गरेर पटक पटक बलात्कार गरिरह्यो । कति पटक त उनले आत्महत्या गर्नेबारे पनि सोचिन् । तर, सकिनन् । एक जना खड्का थरका उनका केटा साथीले उनलाई निकै सहयोग गरे । केटा साथी र उनी एब्युजरको कन्सल्टेन्सीमा गए । त्यहाँका सबै कर्मचारीलाई राखेर, कन्सल्टेन्सी सञ्चालक र फोटो पत्रकार दुवैलाई त्यहाँ राखे । उनीसँगै विजेता बनेकी अर्की युवतीमा पनि उनीसँगै थिइन् ।
‘मैले त्यो बेला सबै कुराहरू भनेँ । मलाई गरेको फोन रेकर्ड, मलाई गरेको म्यासेज सबै देखाइदिएँ । मेरो ब्वाईफ्रेण्डले त्यो मान्छेलाई धेरै पिट्यो,’ ति युवतीले भिडियोमा भनेकी छिन् । समय बित्दै गयो । घटनापछिका यतिका समय निकै कष्टपूर्ण र मानसिक तनावबाटै बित्यो । घटनाबारे उनले धेरैलाई भनिन् । तर, कतैबाट पनि सहयोग मिलेन । झन उल्टै ‘तिमी नै त्यस्ति हौं’ भन्ने जवाफ मिल्थ्यो । यतिसम्म कि आफुमाथि बलात्कार गर्नेकी श्रीमतीलाई पनि भनिन् । उनको श्रीमतीले रूखो जवाफ फर्काइन् । ‘हैन जम्मै केटीहरू मेरै बुढोको पछि किन लाग्छन् ?’ भन्ने जवाफ उनको श्रीमतीले दिइन् ।
यतिमात्र नभएर आफूमाथि भएको बलात्कार र पीडकहरूबारे उनले सन् २००२ कि मिस नेपाल माल्भिका सुब्बालाई जानकारी गराइन् । तर, माल्भिकाले आफूले केही गर्न नसक्ने जानकारी दिएपछि उनी खिन्न भइन् । अहिले घटना सार्वजनिक भइसकेपछि माल्भिकाले प्रष्टीकरण दिएकी छिन् । त्यो बेला मलाई कानुनबारेमा थाहा थिएन भन्दै उनले माफी मागेकी छिन् । उनी ६/७ वर्षको हुँदा फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन् । त्यही बेलादेखि उनको सपना थियो- ठूलो भएपछि मोडल हुन्छु, कलाकार हुन्छु । तर, उनको सपना त्यही घटनाले तुहाइदियो ।
उक्त घटनापछि उनी डिप्रेशनको सिकार बनिन् । अहिलेसम्म पनि उनी उपचार गराइरहेकी छिन् । उनलाई आफुमाथि भएको बलात्कारबारे बोल्न यतिका वर्ष लाग्यो । धेरैले उनीमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । अहिले पनि केटी नै त्यस्ति हो भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । ‘त्यो समय मलाई यस्तो भयो भने के गर्ने ? कहाँ गएर उजुरी गर्ने ? थाहा थिएन । अहिले पो थाहा पाएँ । अनि घटना सार्वजनिक गरेकी हुँ,’ उनले भिडियोमा भनेकी छिन् । उनले भिडियोमार्फत भनेकी छिन्, ‘कुनै पनि केटीहरू आफ्नो आमालाई नलगी कहिँ पनि नजानु । यो मेरो अनुरोध मात्र होइन्, बिन्ती पनि हो ।’
‘हामी पीडितलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । उहाँ सम्पर्कमा आएपछि मात्रै अनुसन्धानका अन्य पाटा अघि बढ्छन्,’ एसएसपी केसीले भने । घटना सार्वजनिक भएपछि यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चलिरहेको छ । मिस नेपाल २०१८ श्रृखंला खतिवडा, नायिका पूजा शर्मा लगायतका सेलिब्रेटीहरू उनको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न समेत माग गरिरहेका छन् ।
अपराध‐मा वर्गिकृत‘ब्युटी प्याजेन्ट’ का नाममा याैन हिंसामा परेकी युवतीको पीडा- बेहोस बनाएर बलात्कार गरेका थिए, nepali news, nepali news protal, News Nepal
फेसबुकमा युवतीको नांगो तस्बिर सार्वजनिक गर्ने धम्की दिने प्रहरी जवान पक्राउ
किशोरीमाथि बलात्कार अरोप लागेका पाण्डे विरुद्व मानव बेचबिखनको जाहेरी दर्ता
यौनजन्य हिंसाकाे हदम्यादबारे संसदीय समितिमा छलफल, थममाया भन्छिन् पीडितले न्याय र पीडक उम्कन नपाउने गरी कानुन बनाउनु पर्छ